रोचक Archives - Page 8 of9- NepalPatra.com
भाद्र २३, पाल्पा | बाँदरले मकैलगायतका अन्नबाली सखाप पारेपछि राहतका लागि पीडित कृषक गाउँपालिका धाउन थालेका छन् । पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–४, छहराका किसान उत्पादित अन्नबाली बाँदरले नष्ट गरेपछि किसान समस्यामा परेका हुन् । वनलाई समुदायको रेखदेखमा रहने जिम्मेवारीपछि हराभरा वन क्षेत्रमा बाँदरको बाहुल्यता बढेको होे । बाँदरलाई पहिले बन्दुकले हानेर मार्ने गरेपनि पनि […]
‘जिरे खुर्सानी’ बिहिबारदेखि पुन नेपाल टेलिभिजनमा नै प्रसारण हुने
भाद्र २२, काठमाडौँ | झन्डै साढे एक वर्षदेखि रोकिएको हास्य टेलिशृंखला ‘जिरे खुसार्नी’ बिहीबारदेखि पुनः नेपाल टेलिभिजनमै प्रसारण हुने भएको छ । शृंखलाका निर्देशक तथा प्रमुख अभिनेता जितु नेपाल (मुन्द्रे)ले जिरे खुसार्नी अब हरेक बिहीबार साँझ पौने ९ बजे हेर्न पाइने जानकारी दिए । हिला जिरे खुसार्नी जितु र शिवहरि पौडेलले संयुक्त रूपमा निर्देशन गर्दथे […]
भाद्र २१, काठमाडौँ । जापानमा एक युवकले लामखुट्टे मारेर सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा फोटो पोस्ट गरेपछि ट्वीटरले नियम उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै उनको ‘एकाउन्ट’ नै बन्द गरिदिएको छ । ‘नेमु इज माइ वाइफ’ ट्वीटर ‘ह्यान्डल’ रहेको ती युवकले लामखुट्टे मारेर ट्वीटरमा पोस्ट गरेपछि उनको पोष्टलाई ३१ हजारभन्दा बढी ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले रिट्वीट् र २७ हजारभन्दा बढीले लाइक […]
के तपाईलाई थाहा छ ? विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन्
के तपाईलाई थाहा छ ? विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन् ! सामन्यतया नेपालीमा साधारण घरायसी प्रयोगमा पिइने नशालु पदार्थलाई रक्सी भनिन्छ। तर आजको यो विश्वव्यापीकरणको युगमा उक्त परिभाषा एकदमै साघुरो हो । आजकल थरिथरिका विभिन्न ब्रान्डका प्रसिद्ध रक्सीहरु नेपालमा पनि पाइन्छन । रक्सीको सेवन प्राचीनकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा भइरहेको पाइन्छ । यसलाई विभिन्न परिस्थिति […]
शुन्यताको यो करामत:अनौठो तथ्य
प्रत्येक भौतिक संरचना परमाणु (एटम) मिलेर बनेको हामीले थाहा पाएकै छौं। पृथ्वीमा सबैभन्दा हलुका तत्व हाइड्रोजन हो। स्मरण रहोस्, हाइड्रोजन हामीले प्रयोग गर्ने पानीमै हुन्छ। यसको अणुको ९९.९९९९९९९९९९९९६ % भाग शुन्य हुन्छ। अब पृथ्वीजत्रो हाइड्रोजन अणुको कल्पना गर्ने हो भने यसको प्रोटोन २०० मिटर केन्द्रको वरिपरि हुन्छ। कल्पना गर्नुस् कि पृथ्वीको अर्ध-व्यास ६४०० किलोमिटर छ। […]
हाम्रो सौर्य मण्डलमा सूर्यलाई केन्द्र बनाएर ९ वटा ग्रह (पछि ‘यम’ हटाएर ८ वटा ग्रह मानिएको छ )ले परिक्रमा गर्छन्। सुर्य जस्ता तारा अरबौं खरबौं छन् हाम्रो तारापुञ्जमा। हाम्रो जस्ता तारापुञ्ज खरबौं छन् यो ब्रह्माण्डमा। ताराहरुको कुल संख्या खरबौं खरब हुन आउँछ। प्रत्येक ताराको औसत १० वटा ग्रह हिसाब गर्दा तपाईं अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ […]